Ndị a bụ smartphones nke a ga-emelite na gam akporo 7.0 Nougat | Akụkọ akụrụngwa
Ndị a bụ smartphones nke a ga-emelite na gam akporo 7.0 Nougat
Izuụka gara aga Google gosipụtara aha nke gam akporo ọhụrụ, nke dị n'ahịa izu ole na ole dịka ụdị nyocha. Mgbe ọtụtụ ntule ukara aha nke Gam akporo 7.0, ruo ugbu a mara dị ka Android N, ga-abụ Android Nougat, na n'oge na-adịghị anya ga-enwe nsụgharị ikpeazụ maka olileanya na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ.
Baptism ndị ọrụ gọọmentị nke ụdị gam akporo ọ bụla bụ egbe mbido maka ndị nrụpụta niile ịmalite ịrụ ọrụ na imelite ngwaọrụ mkpanaka ha. N'oge a ọ nweghị onye nwara inye ụbọchị a kapịrị ọnụ, mana enwere ọtụtụ ndị nrụpụtala ihe etinyegorị aka na mmelite ahụ n'oge na-adịghị anya. Oge nchere maka ọbịbịa nke sistemụ arụmọrụ ọhụrụ na ngwaọrụ sitere na ndị nrụpụta dị iche iche ga-adịgasị iche iche. Offọdụ n'ime ha ekwenyelarị usoro ụzọ ha ugbu a ma ugbu a, ndị ọzọ nọ jụụ.
N'oge ugbu a, anyị ga-egosi gị ndepụta nke ndị nrụpụta nke kwuputara mmelite ya na gam akporo Nougat 7.0, yana smartphones ndị ga-enweta ngwanrọ ọhụrụ ahụ. Naanị ụlọ ọrụ 3 kwadoro atụmatụ ha, ndị ọzọ agbachi nkịtị, ọ bụ ezie na anyị nwere olile anya na ka ụbọchị na-aga, ndị nrụpụta kachasị mkpa n'ahịa ekwentị ga-ekwu okwu ma gosipụta atụmatụ ha.
10 Ndị ọzọ na-emepụta ihe
Olee otú ọ ga-abụ na uzọ ọzọ Ngwaọrụ mkpanaka Google ga-abụ ndị izizi ịnata mmelite gam akporo 7.0 Nougat, dị ka ọ dị na nsụgharị ọhụrụ niile nke gam akporo. Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma inwe ngwaọrụ sitere na nnukwu ọchụchọ ahụ, n'oge na-adịghị anya ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ ụdị nke gam akporo ọhụrụ.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị nwere obi ike ma ọ bụ karịa kwuru ihe ọmụma dị mkpa, ịnwere ike ịwụnye ụdị beta nke gam akporo Nougat na ngwụcha gị nke ị nwere ike ịnwale akụkọ nke ụdị ọhụrụ a, yana ọrụ ọhụrụ na nhọrọ ọ gụnyere.
Lee, anyị gosiri gị smartphones nwere akara Google nke ga-enweta Android 7.0 Nougat eze;
N'ime ndepụta a, ọtụtụ n'ime gị na-atụ uche ya Nexus 5, nke dị ka asịrị kachasị ọhụrụ si karia omume na ị gaghị enweta mmelite a, nke ga-abụ akụkọ ọjọọ maka ọtụtụ ndị ọrụ ka nwere ngwaọrụ a.
N’oge ya Motorola, nke Lenovo nwe ugbu a, bụ nke Google, nke yiri ka ọ na-enyekarị ya ihe ùgwù dị iche iche nke ịnwe ike ịnweta ngwa ngwa ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo nke onye ọrụ ọchụchọ na-ebupụta n'ahịa.
Otu akwụkwọ ụlọ ọrụ dị n'ime ekpugherela ndepụta nke ngwaọrụ ndị a ga-emelite na gam akporo 7.0 Nougat, ọ bụ ezie na ee, n'oge dị ka ọ na-eme na ndị ọzọ na-emepụta anyị enweghị ụbọchị ọ bụla, ọbụnadị na-egosi. N'ezie, n'oge a leaked ọmụma na-adịghị e eze kwadoro site Motorola.
* jiri nwayọọ kụọ aka *?
Esịtidem akwụkwọ na-atụ aro nke Moto ngwaọrụ ga-enweta "Android Nougat" pic.twitter.com/3zSLi0rVRn
Nke a bụ ndepụta nke smartphones nke a ga-emelite n'enweghị nsogbu na gam akporo 7.0, na nke nwere ike itinye ngwaọrụ ọzọ;
Moto X mbipụta dị ọcha
Moto X yledị
Moto X Gwuo
Moto G (ọgbọ 3)
KWAT TurR Tur Turbo 2
Gbanyụọ Turbo Maxx 2
Moto G Turbo Edition (ọgbọ nke atọ)
Moto G Turbo (mbipụta Virat Kohli)
HTC Ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta izizi iji kwado ndepụta nke ngwaọrụ mkpanaka nke a ga-emelite na ụdị ọhụrụ nke gam akporo nke akwadoro ya. N'oge a ndị Taiwan emeghị ihe dị iche na anyị nwere ndepụta gọọmentị nke smartphones nke a ga-emelite na Nougat nke e bipụtara site na netwọkụ mmekọrịta dị iche iche nke ụlọ ọrụ ahụ.
N'ezie, ndepụta a anyị na-egosi gị n'okpuru ebe a bụ iche n'echiche na ọ ga-eto, ebe ọ bụ na ugbu a ọ nwere nanị ọnụ ọgụgụ 3, nke doro anya na ọ pere mpe maka ụlọ ọrụ dịka HTC.
Dị oke ụtọ. Android Nougat - usoro ọzọ nke gam akporo Google - ga-abịa HTC 10, HTC One A9 & HTC One M9. pic.twitter.com/cB5S2zv0PW
N'ebe a, anyị gwụchara nyocha nke ndị na-emepụta ihe ndị nwere ikike, ma ọ bụ site na nsị, gosipụtara na ngwaọrụ mkpanaka nke ga-ebu ụzọ melite gam akporo 7.0 Nougat ọhụrụ ahụ ma anyị amalite site na ndị ọzọ na-emepụta ndị na-ekwenyeghị ihe ọ bụla n'oge ahụ.
Samsung na mmelite nke nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo adịchaghị ngwa ngwa, ya mere, a ga-atụ anya na gam akporo ọhụrụ Nougat ga-ewe obere oge iji ruo ngwaọrụ mkpanaka dị iche iche nke ụlọ ọrụ South Korea.
Dị ka asịrị, ihe ọhụrụ version nke gam akporo ga-eru ugbu a ọkọlọtọ nke ụlọ ọrụ na Aga m ahapụ Galaxy S5 na 3 Galaxy Note. Site na njedebe ndị a gaa n'ihu ma ọ bụrụhaala na ha nọ n'ime ihe a na-akpọ n'etiti ma ọ bụ dị elu, ha kwesịrị imelite ya na gam akporo 7.0 ọhụrụ ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere Samsung ama maka ugbu a, ị ga-echere maka ndepụta nke ngwaọrụ iji kwado ma nwee ike ịmara ma ọ bụrụ na ị gụnyere ya ugbu a.
Otu n'ime ndị nrụpụta ekwupụtala atụmatụ ha iji kwalite gam akporo 7.0 Nougat n'oge na-adịbeghị anya OnePlus, nke n’agbanyeghi na enwere uzo ole na ole n’ahia, na-agbasi mbo ike ime ka ha di nkpa ma karie ka ha di n’udo.
Lee, anyị gosiri gị ngwaọrụ mkpanaka nwere akara OnePlus ka emelitere, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo;
Ruo oge ụfọdụ ugbu a LG LG G4 bụ otu n’ime ndị nrụpụta na - eduga n’ihe banyere mmelite gam akporo ma n’agaghị n’ihu, LG GXNUMX bụ onye ama ama izizi melite gam akporo Marshmallow (Nexus n’akụkụ). Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ, na ọ bụ ezie maka oge ahụ anyị enweghị ozi ọ bụla, LG si mobile ngwaọrụ ga-abụ ndị mbụ na-enweta ọhụrụ gam akporo 7.0 Nougat.
N'ime ndepụta a, anyị kwesịrị ịchọta LG G5, LG G4 na LG V10 na nchekwa zuru oke. Ọ bụrụ na ihe agazie etu ha kwesiri, ọ ga-abụ na ndepụta a sara mbara karịa, ọ bụ ezie na ịchọpụta na anyị ga-eche ka LG gosipụta ọkwá na ọ ga - emelite.
Maka oge ahụ LG egosiworị na ha ga-enweta Android 7.0 Nougat LG G5, na LG V20 ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya nke awụnyerela n'ime ya.
Huawei Ọ bụ taa otu n'ime ndị nrụpụta kachasị mkpa na ahịa ekwentị mkpanaaka ugbu a yana n'ezie ọ na-aga imelite ọtụtụ n'ime ngwaọrụ mkpanaka ya na gam akporo 7.0 Nougat. Agbanyeghị, n'oge a anyị enweghị ndepụta gọọmentị maka njedebe, ọ bụ ezie na anyị enweela ike ịmara na ụfọdụ n'ime ha nwere ike ọ gaghị enweta mmelite ahụ site na OTA, dị ka ọ dị na mbụ yana karịa nkasi obi niile, na-emelite aka site na nbudata ROM.
Eleghi anya, Huawei P9 na ụdị ya dị iche iche, Huawei Mate S, Huawei Mate 8 na Huawei P8 ga-abụ ụfọdụ n'ime ọdụ ndị na-agaghị echefu nhọpụta na mmelite ahụ., ọ bụ ezie na iji kwado ya, anyị ga-echere ka onye nrụpụta China kwupụta.
Huawei na Honor abụghị otu n'ime ndị nrụpụta kachasị ọsọ iji melite ngwaọrụ ha, yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọnụ site n'aka ndị na-eme China, ihe kachasị mma bụ na ị ga-adị nfe ebe anyị kwenyeghị na ozugbo ma ọ bụ opekata mpe n'otu oge. na ndị ọrụ LG ma ọ bụ Motorola ga-enwe ike ịnụ ụtọ gam akporo 7.0 Nougat ọhụrụ na ngwaọrụ gị site n'aka ndị nrụpụta China.
De Sony Anyị nwere ike ịsị na ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta ole na ole ga-emelite ọtụtụ ngwaọrụ mkpanaka ya na katalọgụ ya. Dịka ọmụmaatụ, na-agaghị ebe dị anya, ụlọ ọrụ Japan ahụ achọpụtala na ekwentị niile nke ezinụlọ Xperia Z na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị niile nke Xperia X na C ezinụlọ ga-enweta Android Marshmallow. Ọ bụ iche n'echiche na ụdị ihe ahụ mere na gam akporo 7.0 Nougat ọhụrụ ahụ, ọ bụ ezie na anyị amaghị oge ọbịbịa nke melite nwere ike igbu oge.
N’ụbọchị ndị a, ụfọdụ ọnụ ụlọ ọrụ ndị Japan amalitela ịnata oke nke Nougat. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ndepụta zuru ezu nke ngwaọrụ ndị ga-enweta ụdị ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ gam akporo;
Sony Xperia Z5 adịchaghị
Ebe ọ bụ na gam akporo 7.0 na eze kụrụ ahịa Otu n'ime ụlọ ọrụ ndị rụrụ ọrụ kpụ ọkụ n'ọnụ iji melite njedebe ya bụ Spanish BQ. Ọhụrụ gam akporo agaghị adị ruo nkeji iri na ise nke afọ, mana anyị amaralarị ndepụta nke smartphones nke a ga-emelite.
N'okpuru ebe anyị na-egosi gị BQ ọnụ ga-enwe gam akporo 7.0 Nougat na obere oge;
BQ Aquaris 5X gbakwunyere
Anyị na-agwa gị nke ahụ #Aquaris X5 Plus, U-nso, A4.5, X5, M5 na M5.5 ga-akwalite ya #android 7 Nougat pic.twitter.com/YFGT9Dbc67
- Ajụjụ (@BQ) November 17, 2016
Ndị ọzọ na-emepụta ihe
Anyị enyochaworị atụmatụ nke ụfọdụ ndị nrụpụta kachasị mkpa n'ụwa, mana obi abụọ adịghị ya na ọtụtụ ndị ọzọ nọ n'ahịa ahụ, dịka Xiaomi, BQ o Usoro Ike. Maka ugbu a, ewezuga ụlọ ọrụ ndị anyị gosipụtara, ọ nweghị ndị ọzọ kwupụtara atụmatụ ụzọ ya maka mmelite ahụ.
Na ụbọchị ma ọ bụ izu na-abịanụ, anyị ga-amata smartphones ọhụrụ ndị a ga-emelite na gam akporo 7.0 Nougat na anyị ga-enwe ike ịgbasa ndepụta a. Ihe ọ bụla ekwentị mkpanaaka ị nwere, debe ndepụta a n'etiti ọkacha mmasị gị n'ihi na ebe a anyị ga-ebipụta akụkọ niile na-eme na mbata nke ụdị ọhụrụ nke gam akporo na ntanetị dị iche iche dị na ahịa.
Gị smartphone dị na ndepụta aha ngwaọrụ nke a ga-emelite na gam akporo 7.0 Nougat?. Gwa anyị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na otu netwọkụ mmekọrịta anyị nọ na ya ma gwa anyị ihe ị tụrụ anya na ụdị ọhụrụ nke sistemụ mkpanaka Google nke ga - erute na ekwentị gị
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Ndị a bụ smartphones nke a ga-emelite na gam akporo 7.0 Nougat
Ọ kwesịrị dakọtara na Samsung S5
A ga-emelite ya maka bq aquaris m5
Enwere ebe dị n'ahịa na ụbọchị anyị taa maka Blackberry?
Batrị buru oke ibu kpatara nsogbu nke Galaxy Note 7